Indlu efana nale ayiveli kaningi. Ngakho-ke, thatha izwi lethu futhi usebenzise lokhu kanye ekunikezelweni kwempilo yonke. Izimo zezimakethe ezikhona manje zenza isivumelwano sihehe kahle abathengi ababheke impahla e-River Garden Housing Scheme. Lo mgwaqo we-GT unconywa kakhulu ngokuthi unezinye zezindawo ezinhle kakhulu. Sikunxusa kakhulu ukuthi ubheke lo mnikelo. Kuyinzuzo enhle ngakho thenga le ndawo namuhla. Ithenge ngenkathi usakwazi ngoba intengo ecashuniwe yama-Rs 25,000,000 ingahle ingahlali isikhathi eside. Le Marla House eyi-10 iyimpahla enhle kakhulu ongayithenga okwamanje. Xhumana nathi manje ukuthola lonke ulwazi oludingayo.